सभापतिलाई ‘सहयोगी’हरूले नै गुमराहमा पारे :: गोपालमान श्रेष्ठ (कांग्रेस नेता) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:३४ English
सभापतिलाई ‘सहयोगी’हरूले नै गुमराहमा पारे :: गोपालमान श्रेष्ठ (कांग्रेस नेता)
० नेपाली काङ्ग्रेस पनि मङ्सिरमा संविधानसभाको चुनाव चाहँदैन भनेर मानिसहरू भन्न थाले नि, किन होला ?
– नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैले त्यस्तो आरोप लगाएकोजस्तो मलाई लाग्दैन । यदि कोही त्यस्तो भन्छ भने या त त्यो व्यक्ति, समूह या पार्टी वस्तुनिष्ठ भएर मुलुकको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्न असक्षम छ भन्नुपर्ने हुन्छ या चाहिँ सरासर भ्रमको खेती गरेर काङ्ग्रेसलाई बद्नाम गर्ने कुत्सित चाल चलिरहेको सावित हुन्छ । वास्तवमा काङ्ग्रेस त असारमै चुनाव चाहन्थ्यो, तर असारको परिस्थिति टरिसकेको अवस्था छ । अझै पनि हामी आगामी कात्तिकको दोस्रो या तेस्रो सातामा होस्, नभए पनि मङ्सिरको पहिलो साताभन्दा पर निर्वाचनको तिथि नजाओस् भन्नेमा हरसम्भव जोड लगाइरहेका छौँ । यस्तो जगजाहेर कुरालाई पनि अन्यथा किसिमले आरोप लगाउनु दिउँसै रात पार्न खोजेजत्तिकै हो ।
० काङ्ग्रेसभित्रै अनेक द्वन्द्व र विवाद छ, निर्वाचनका लागि के वातावरण बनाइरहनुभएको होला त तपाईंहरूले ?
– चुनावको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसमा कुनै विवाद र द्वन्द्व छैन । अन्य मुद्दाका सवालमा पनि बाहिर प्रचार गर्न खोजिएजस्तो विवाद र असमझदारी केही छैन । सभापति कोइराला र वरिष्ठ नेता देउवाबीच अत्यन्त राम्रो समझदारी र मेलमिलाप रहेको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ । सभापतिजीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने बेला पनि देउवाजीले नै प्रस्ताव गर्नुभएको तपाईंहरूले देख्नुभएकै हो । विवाद र असमझदारी भएको भए त्यस्तो सम्भव हुन्थ्यो र ?
० पार्टीको विभाग गठनपछि त विवाद सतहमै आएको छ नि, होइन र ?
– यो पनि अतिरञ्जना मात्रै हो । सभापतिजीले देउवाजीसँग नामहरू माग्नुभएको थियो र मागेअनुसार नाम उपलब्ध गराइएको हो । तर, जुन सदासयताका साथ नाम मागियो र उपलब्ध गराइयो त्यसअनुरूपको एड्रेस नभएको पाइएको छ । यो कसरी भयो भन्ने विषय पार्टीमा छलफलको विषय पक्कै बनेको छ । तथापि, यस प्रकरणलाई कोइराला र देउवाबीच कलह भनेर प्रचार गर्नु आवश्यक छैन, यसमा त हामी सबैको असन्तुष्टि छ, देउवाजीको मात्र यसमा कन्सर्न रहेको भन्ने होइन । यसमा त सभापतिनिकट भनिएका व्यक्तिहरूलाई पनि चित्त नबुझेको स्पष्टै छ ।
० अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा पार्टी सभापतिले गरेको निर्णयमा तपाईंहरू किन विरोध गरिरहनुभएको छ ?
– पार्टी सभापतिले नै गरेको भए त हामी विरोध गथ्र्यौं या गर्दैनथ्र्यौं– यो अलग प्रश्न हो । यहाँ त सभापतिलाई पनि गुमराहमा पारेर काम भएजस्तो गन्ध आएको छ । सभापतिजीको आग्रहअनुसार विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्र कार्की र मसमेत भएर नामहरू तय गरी दिएका थियौँ । हामीले उहाँलाई भनेका थियौँ कि नामहरूलाई अन्तिम रूप दिनका लागि छलफलमा हामीलाई समेत राख्नुपर्ने भए राख्नुहोला, छलफल गरौँला । त्यसको जवाफमा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘मलाई भरोसा गर्नुहोस्, दिएको नामलाई पूर्णरूपेण एड्रेस गरौँला ।’ तर, उहाँ पोखरा जानुभएको बेला अचानक शनिबारको रात पारेर नाम प्रकाशन भयो । यस्तो कसरी भयो भन्ने कुराचाहिँ सभापतिजीलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ ।
० पार्टी सभापतिलाई कमजोर र असफल बनाउन काङ्ग्रेसकै नेताहरू लाग्न थालेको आभास भएको छ त ?
– खै ! हामी त लागेका छैनौँ । नियमावलीभन्दा विधान ठूलो हुन्छ, त्यसैले नियमावलीले विधानलाई खाने अवस्था निम्त्याइनुभएन भन्ने हाम्रो सदासयता र आवाज हो । यो कुरा गर्दा सभापतिलाई असफल बनाउन खोजेको आरोप लाग्छ भने त भन्नु के छ र ! हामीले त सभापतिलाई झन् सफल बनाउन, पार्टीलाई सुदृढ तुल्याउन खोजेका हौँ ।
० पार्टीमा कसलाई के जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा त सभापतिले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्ने होइन र ? किन जे कुरामा पनि भागबण्डा चाहिन्छ काङ्ग्रेसमा ?
– भागबण्डाको कुरा होइन, सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने आदर्शमा आधारित मुद्दा हो यो । सभापतिले आफ्नो अधिकार भन्दै सीमित व्यक्तिलाई छाडा छोडिदिनुभयो भने त पार्टी कहाँ पुग्छ ? विचारणीय कुरा छ नि यो त । यति ठूलो पार्टी छ, कम्तीमा पनि दश लाख हाम्रा सक्रिय सदस्य नै छन्, यस्तो व्यापक पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सबैको राय–सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ । उदार भावना राखेर व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ नेतृत्वले । ६ अञ्चलप्रमुख र १२ विभागीय प्रमुखहरूले विधानसम्मत भएन भनेर असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा गरेका हुन्, न कि कुनै भागबण्डा खोजेर व्यवधान खडा गरेका हुन् ।
० तपाईं यसो भन्नुहुन्छ तर स्वतन्त्र स्थानमा उभिएर हेर्नेहरूले त सभापति सुशील कोइरालासँग तपाईंहरू बार्गेनिङ गरिरहनुभएको देखिन्छ ?
– यो भ्रम हो, फगत आरोप हो । उहाँसँग हाम्रो कुनै बार्गेनिङ छैन, बार्गेनिङ गर्नु जरुरी पनि छैन । पार्टी हितका लागि यी–यी विषयलाई एड्रेस गर्नुस् भनेर सुझाव दिएका मात्रै हौँ । उहाँले मागेअनुसार सात दिन मिहिनेत गरेर देशभरको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले नाम दिएका हौँ, उहाँकै सहयोगका लागि यति गरिएको हो, त्यो लिस्टअनुसार राम्रैसँग नामहरू समावेश हुनेछन् भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, अति न्यून नाम मात्रै समावेश भएको पाइयो । यसले पार्टीको हित हुँदैन भन्ने कुरा साथीहरूले उठाइरहनुभएको छ जो जायज पनि छ ।
० अब के गर्नुहुन्छ त तपाईंहरू ?
– हामी अहिले केही गर्दैनौँ । सभापतिजीसँग भेट्छौँ, ममाथि भरोसा राख्नुस् भन्नुभएको थियो तर नतिजा त अर्कै आयो, यो के भएको हो सभापतिज्यू ? भनेर कुरा राख्छौँ । तपाईं पोखरा हुँदा काठमाडौंमा राति किन र कसरी नाम प्रकाशित भयो ? यसमा तपाईंलाई पनि गुमराहमा पारिएको हो कि ? भनी हामी प्रश्न गर्छौं । त्यसको जवाफ उहाँले के दिनुहुन्छ– त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि ।
० त्यसो भए तपाईंहरू सभापतिको ठाडो विरोध गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न ?
– हेर्नुस्, आफ्नै पार्टीका सभापतिलाई विरोधका लागि विरोध गर्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन नि । त्यसमाथि चुनावमा होमिनुपर्ने बेला छ । बखेडा गर्ने कुरै आउँदैन । त्यसमाथि उहाँ पनि मान्छे हो, मान्छेबाटै गल्ती हुने हो, गल्ती सुधार गर्न सकिन्छ । कार्यदल एउटा बनाएर गल्ती सच्याउनेतर्फ लाग्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । सबैले विश्वास गर्न सक्ने एउटा कार्यदल बनाएर असमझदारी र गल्ती करेक्सन गर्नेतिर लाग्न हामी सभापतिजीलाई प्रेरित गर्नेछौँ । दुई–चारजनालाई मात्र विश्वास गर्न खोज्दा घात हुन्छ भन्ने उहाँले बुझ्नुभएको हुनुपर्छ । वास्तवमा आफूमाथि आफ्नै ठानिएकाबाट घात भएको छ भन्ने उहाँलाई आभास भएको अनुभूति हामीलाई भएको छ । तसर्थ, अब गल्ती सच्याउनेतर्फ सभापतिजी लाग्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
० तपाईंहरू पदका लागि किन यस्तो गर्नुहुन्छ, पदीय हानथाप गर्ने बेला हो र यो भनेको ?
– पदको हानथाप पटक्कै होइन, कोटरीबाट पार्टी चलाउन खोज्नु सबैका लागि अहित हुन्छ भन्ने यथार्थ सम्झाइदिन खोजेका मत्रै हौँ हामीले । संस्थागत हिसाबबाट चल्ने प्रयत्न हुनुपर्‍यो भनेका हौँ हामीले । हामी उहाँलाई कसरी सफल बनाउने भनेर माथापच्ची गरिरहने उहाँचाहिँ आफ्नै व्यवहारले असफल हुँदै जाने अवस्थाले त न उहाँको हित हुन्छ न पार्टीको । यति पनि हामीले बताइरहनुपर्ने हो र ?
० तपाईंले सभापतिलाई सफल तुल्याउन प्रयास गरेको कुरा पटक–पटक दोहोर्‍याउनुभयो, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन देउवाजीले प्रस्ताव गरेको र आफूहरूले ताली बजाएर समर्थन गरेको कुरा उछाल्नुभयो, तर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिइने भित्री खेल बुझेकोले मात्र देउवाजीले उहाँको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको भनिन्छ नि, हो ?
– खै ! प्रचण्डजीले यदि काङ्ग्रेस पार्टीले सुशीलको नाममा समर्थन जनाउँछ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्नुभयो, त्यसो हो भने आफ्नो सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर किन चुकाउने भन्ने सोचेर हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ । उहाँ हाम्रो सभापति हो, उहाँकै नेतृत्वमा आगामी चुनावी मैदानमा हामी होमिने हो । सोझो कुरा यही हो । अब यसलाई तोडमरोड गरेर बुझ्ने, बङ्ग्याउने काम हुन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गरिरहनु आवश्यक पनि ठान्दैनौँ हामी । हामीले बुझेको कुरो त यत्ति हो कि काङ्ग्रेस ठूलो परिवार हो र यो परिवारको मूली सुशील कोइराला हुनुहुन्छ । उहाँले परिवारका आफ्ना सदस्यहरू सबैलाई खुसी तुल्याएर अघि बढ्न के–कसो गर्नुपर्छ– गर्नुपर्‍यो । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार गर्नुभएन । यसमा हामीले पुर्‍याउनुपर्ने मद्दत के हो हामी गर्न तयार छौँ । सभापतिले पार्टीभित्रबाट योग्य र सक्षमलाई छानेर जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो, योग्यताअनुसारको जिम्मेवारी दिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्‍यो ।
० भनेपछि, भावी निर्वाचनपछि काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएमा कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न तपाईंहरू रोक्नुहुन्न, होइन त ?
– कसरी रोक्न मिल्छ ? अहिलेसम्म त उहाँ नै पार्टी सभापति हो नि ! सभापतिले नै मैले सकिनँ या इच्छा भएन, अर्को साथी अघि सर्नुपर्‍यो भन्नुभयो भने बेग्लै कुरा हो । सबैलाई मिलाएर, मुलुकको विश्वास जितेर बहुमत ल्याउन सकेमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ, यो पनि कुनै प्रश्न गरिरहनुपर्ने विषय हो र ?
० शेरबहादुरजीले विरोध गर्नुहुन्न होला त्यसबेला ?
– ए बाबा ! शेरबहादुरजीले त उहाँको नाम नै प्रस्ताव गर्नुभएको हो नि । सहयोग नै गरिरहनुभएको छ नि उहाँले । अब फेरि यत्रो अविश्वास गर्नुपर्ने किन ? सहयोग गर्दागर्दै पनि अविश्वास गर्दा त घाटा कसलाई पुग्छ, सभापतिजीलाई नै होइन र ? हेर्नुस्, कसैले सहयोग गरेर मात्रै पनि हुँदोरहेनछ, सहयोग लिन पनि जान्नुपर्ने रहेछ र दिन पनि जान्नैपर्ने रहेछ । सहयोग लिने र दिने पनि एउटा कला नै रहेछ ।
० त्यसो भए सभापति र शेरबहादुरबीचमा सम्बन्ध राम्रो छ होइन त ?
– अहिलेसम्म राम्रो छ, केही बिग्रेको छैन । उहाँको कामकारबाहीमा भर पर्छ । सभापतिले दिनुभएको वचनको पालना कत्तिको हुन्छ, यसले पनि सम्बन्धमा फरक पार्न सक्छ ।
० प्रसङ्ग मोडौँ, चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठाउनुभयो नि तपाईंका सभापति कोइरालाले, यो उचित हो ?
– यो त हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको कुरा हो । सभापतिजीले पनि ढिलै भए पनि यो कुरा उठाउनुभएकोमा म त असाध्यै खुसी छु । हामीले पार्टीमा समेत फरक मतका रूपमा दर्ज गरेको विषयलाई दुई महिनापछि भए पनि सभापतिजीले महसुस गर्नु हामी सत्य रहेछौँ भनी पुष्टि हुने कुरा भयो, होइन र ?
० रेग्मीले राजीनामा दिँदा त संवैधानिक सङ्कट आउँछ भनिन्छ नि, त्यस्तो नहोला ?
– कुन संविधानविद्ले त्यो भनेका छन्, खै मैले त सुनेको छैन । संवैधानिक सङ्कट त रेग्मीज्यूले राजीनामा नदिँदाचाहिँ आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
० उहाँले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिने सङ्केत गरिसक्नुभएको छ, अब के होला त ?
– रेग्मीज्यूकै हितका लागि यो कुरा गरिएको हो । उहाँ सफल हुने हो भने यो आमभावनाको कदर उहाँले गर्नुहुनेछ । ठूलो पदमा गइसकेको व्यक्तिले सानो पदलाई खल्तीमा लुकाएर राखिरहनुको कुनै तुक हुँदैन । अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई ‘का.मु.’ हटाएर ‘प्रधानन्यायाधीश’ घोषणा गरिदिँदा धेरै कुराको छिनोफानो हुने अवस्था छ । चुनाव हुने या नहुने भनी संशय पैदा भइरहेको आजको अवस्थामा उहाँले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिँदा नब्बे प्रतिशत काम सहजताका साथ अघि बढ्न सक्छ ।
उहाँले यो बुझ्नुपर्छ, होइन भने के–के हुन्छ हेर्दै जाऊँ ।
१७ जेष्ठ २०७०, शुक्रबार ०६:२२ मा प्रकाशित